Wednesday March 24, 2021 - 09:04:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixin kasoo baxday hay'adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 15 ruux barakacayaal ah ay dhinteen halka 560 ruux ay dhaawacyo soo gaaren kadib markii uu dab qabsaday xero ay dadkaas ku sugnaayeen.
ilo wareedyo ayaa sheegay in dadka dhintay ay ubadanyihiin haween iyo carruur kasoo jeeda qowmiyadda Rohinga ee muslimiinta ah.
Hoggaamiyaasha barakacayaasha muslimiinta ayaa sheegay in dabku uu bilaawday xilli habeen ah oo ay dadku hurdayeen, saraakiisha booliska Bangladesh ayaa xaqiijiyay in ay wadaan baaritaanno ay ku ogaanayaan sababta dabka keentay.
Dad ku dhow 750 kun oo ruux muslimiin Rohinga ah ayaa Miyanmar isaga cararay kadib markii ay ciidamada dowladda iyo dadka gaalada Buudiyiinta ah ay ku qaadeen weeraro laayaan ah sanaddii 2017 halka kumanaan kale ladilay.
Dad ka badan 20 ruux oo ku dhintay dagaal beeleedyo ka dhacay bartamaha Soomaaliya.
Jeneraal kamid ahaa ciidamada Uganda ee Soomaaliya ku duulay oo dhintay.